Zimbabwe is sitting on a ‘Covid-19 time bomb’ : Nigeria
The government had been dragged to court for failure to supply potable water during the 21 days of lockdown
President Emmerson Mnangagwa came face to face with the reality of the socioeconomic problems Zimbabweans were encountering on a tour of urban townships this week where he witnessed people grappling with water supply challenges and informal traders reverting back to the streets, despite a 21-day lockdown directive.
Crowds of people queue at a bank on March 23, 2020, in Bulawayo, Zimbabwe. On March 23, 2020, Zimbabwe announced a first Covid-19 coronavirus related death.
Zimbabwe had 500 functional test kits for Covid-19 and 438 of these had been used by Thursday
A disaster is loading in Zimbabwe. Lives are at risk
A Zimbabwe Republic Police (ZRP) anti-riot police water cannon sprays disinfectant liquid at a deserted bus rank in Mbare township in Harare. (Jekesai Njikizana/AFP)
Our security arms will be intensifying their patrols to ensure compliance and curb movement of pedestrians and vehicles
« Water crisis could sabotage Zimbabwe’s coronavirus lockdown » ‘Go to another city’ – African community targeted in China coronavirus crackdown